စိတ်လက်လှုပ်ရှား expression များ - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on December 8, 2014 at 16:31 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုရေးသားတဲ့အခါ native speakers တွေလို သဘာဝကျကျ ပြောနိုင်ဖို့ အတွက် expression များများကို လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်။ အခုလည်း စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖေါ်ပြတဲ့ expression တစ်ချို့ကိုဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်က စိတ်လှုပ်ရှားတယ် (excited) ဆိုတာကိုပြောတဲ့ expression အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကတစ်ခုကတော့ ‘beside oneself’ ဖြစ်ပါတယ်။ ‘beside oneself’ ကို စိတ်ဆိုးတာရော ၊ ဝမ်းသာတာရော နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ‘You can be beside yourself with anger or beside yourself with happiness’ အကယ်၍ သင်ဟာ beside yourself ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ၊ သင်ဟာ တစ်အားစိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အခြေအနေ ‘in an extremely emotional condition’ မှာရှိနေပါတယ်တဲ့ ။
တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင် ‘You are filled with excitement.’ ပေါ့။
Dictionary မှာ beside ကို next to သို့မဟုတ် at the side of (ဘေးဖက်မှာ) လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ‘beside oneself’ ကိုတည့်တည့်တွေးကြည့်ရင် သင်ကသင့်ဘေးကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ လက်တွေ့စကားနဲ့ဆို တော်တော် မဖြစ်နိုင်တာဘဲနော်။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူတွေ အဆိုအရဒီ expression က ရှေးက ယုံကြည်မှု အယူအဆတစ်ခုဖြစ်တဲ့ magic ကလာတာတဲ့။ မှော်အတတ်ပညာနဲ့ သင်ဟာတစ်ကယ်ဘဲ သင့်ကိုယ်ထဲကနေ ထွက်ပြီး ဘေးကိုရောက်နေအောင် လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုကနေဆင်းသက်လာပုံရပါတယ်။ စုန်းတစ္ဆေ တွေဟာဘာမဆိုလုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားတွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားရင် သူရဲ့ ဖြစ်ပျက် နေပုံကို သူကိုယ်တိုင် ဘေးကနေထိုင်ကြည့်နေရသလို ခံစားရတယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။
ဆိုပါတော့ သင့်ကို အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားတစ်ဦးက ဒီလိုလာပြောမယ်…
‘When my wife told me we were going to haveababy, I was beside myself with joy.’
ဒါဆိုရင် သူကသတင်းကောင်း ကြားရလို့ တစ်အားပျော်သွားတာကိုပြောနေတာဖြစ်သလို၊ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကို ‘I was beside myself with anger because I just lost my mobile.’ လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင် သူက တော်တော်စိတ်ဆိုးနေတယ် ဆိုတာကိုပြောတာပေါ့။ သဘောပေါက်တယ် မဟုတ်လား။
ကဲ … excitement နဲ့ဆိုင်တဲ့ နောက် expression တစ်ခုကို ဆက်တင်ပြပါမယ်။ သင်ဟာ အရမ်း အပျော်လွန်ပြီး တစ်အားစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ ထူးထူးဆန်းဆန်း အပြုအမူ တစ်ခုခု ကိုလုပ်မိတတ်ပါတယ်။ ‘You are full of joy and extremely excited about something.’ (စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ် ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။)
ဥပမာစာ မေးပွဲအောင်စာရင်း သွားကြည့်ရင်း ကိုယ့်နာမည်ကို အောင်စာရင်းထဲမှာ ဂုဏ်ထူးတွေ တသီကြီးနဲ့ တွေ့လိုက်ရတော့ အပျော်လွန်လို့ ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိ လူပုံလည်ကြီးထဲမှာ ကွေးနေအောင် ကမိတာလိုမျိုးပေါ့။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာကို ‘flip your lid’ လို့ပြောတယ်။ ‘Lid’ ဆိုတာတစ်ခုခုရဲ့ အဖုံးမဟုတ်လား။ အထဲက အရာတွေ အပြင်ကိုမထွက်နိုင်အောင် ဖုံးဖိပေးရတဲ့ အရာပေါ့။ ဥပမာ အိုးအဖုံးဆိုရင် အိုးထဲက အပူဓါတ်တွေ အပြင်မထွက်အောင် ဖုံးထားပေးသလိုမျိုးပေါ့။ ‘Flip’ ဆိုတာမှောက်ပစ်တယ်၊ လှန်ပစ်တယ်လို့ ပြောတာပါ။ ဒါဆို ‘flip your lid’ ဆိုရင် သင်ဟာ အရမ်းအရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားပြီး စိတ်တွေ လွတ်ထွက်ကုန်တယ်။ (စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ် ဖြစ်သွားတယ်) ပေါ့နော်။ တစ်ခုခုကို အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်လို့ အသိစိတ်တောင် လွတ်သွားတဲ့ အထိ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်ရင် flip your lid (over something) ကိုသုံးတယ်။ ဥပမာ - ‘A young man might flip his lid overapretty, young woman.’
ဒါမဟုတ် သင်ဟာ စိတ်မထိမ်းနိုင်အောင် ဒေါသထွက်တယ်လို့ ပြောချင်ရင်လည်း ‘ I flip my lid because he hit my new car.’ လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီ expression မှာ 'flip' တစ်လုံးတည်းကိုဘဲ သုံးတာလည်းတွေ့လာရပါတယ်။ ဥပမာ Mary flipped overanew boy friend. (မေရီ က သူ့ရည်းစားအသစ်ကို အရူးအမူးဖြစ်နေတယ်။)
ဒီexpressionနဲ့ အလားတူတဲ့ဟာ နောက်တစ်ခုက ‘lose your head’ ဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းဆိုတာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှု၊ တွေးခေါ်နိုင်မှုနဲ့ တင်စားထားတာ ဖြစ်တာမို့ ‘lose your head’ ဆိုတာခေါင်းမရှိတော့တာ ၊ မဆင်ခြင်နိုင်တော့တာ ၊ စိတ်လွတ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်။
Expression တွေကိုပုံမှန်မသုံးရင် မေ့သွားတတ်ပါတယ်။ မမေ့အောင် အမြဲကြိုးစားပြီးသုံးပေးပါ။
အင်ျဂလိပျလိုပွောဆိုရေးသားတဲ့အခါ native speakers တှလေို သဘာဝကကြ ပွောနိုငျဖို့ အတှကျ expression မြားမြားကို လလေ့ာပွီး လကေ့ငျြ့သငျ့ပါတယျ။ အခုလညျး စိတျလှုပျရှားမှုကိုဖျေါပွတဲ့ expression တဈခြို့ကိုဖျေါပွလိုကျပါတယျ။
တဈစုံတဈယောကျက စိတျလှုပျရှားတယျ (excited) ဆိုတာကိုပွောတဲ့ expression အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီထဲကတဈခုကတော့ ‘beside oneself’ ဖွဈပါတယျ။ ‘beside oneself’ ကို စိတျဆိုးတာရော ၊ ဝမျးသာတာရော နှဈမြိုးစလုံးအတှကျ သုံးနိုငျပါတယျ။ ‘You can be beside yourself with anger or beside yourself with happiness’ အကယျ၍ သငျဟာ beside yourself ဖွဈနတေယျဆိုရငျ ၊ သငျဟာ တဈအားစိတျလှုပျရှားနတေဲ့ အခွအေနေ ‘in an extremely emotional condition’ မှာရှိနပေါတယျတဲ့ ။
တဈနညျးအားဖွငျ့ ပွောရရငျ ‘You are filled with excitement.’ ပေါ့။
Dictionary မှာ beside ကို next to သို့မဟုတျ at the side of (ဘေးဖကျမှာ) လို့ အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ‘beside oneself’ ကိုတညျ့တညျ့တှေးကွညျ့ရငျ သငျကသငျ့ဘေးကိုရောကျနတေယျဆိုတော့ လကျတှစေ့ကားနဲ့ဆို တျောတျော မဖွဈနိုငျတာဘဲနျော။ ဒါပမေဲ့ ဘာသာစကားကြှမျးကငျြသူတှေ အဆိုအရဒီ expression က ရှေးက ယုံကွညျမှု အယူအဆတဈခုဖွဈတဲ့ magic ကလာတာတဲ့။ မှျောအတတျပညာနဲ့ သငျဟာတဈကယျဘဲ သငျ့ကိုယျထဲကနေ ထှကျပွီး ဘေးကိုရောကျနအေောငျ လုပျလို့ရတယျဆိုတဲ့ ယုံကွညျမှုကနဆေငျးသကျလာပုံရပါတယျ။ စုနျးတစ်ဆေ တှဟောဘာမဆိုလုပျနိုငျတဲ့ စှမျးအားတှေ ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ တဈစုံတဈယောကျဟာ စိတျလှုပျရှားရငျ သူရဲ့ ဖွဈပကျြ နပေုံကို သူကိုယျတိုငျ ဘေးကနထေိုငျကွညျ့နရေသလို ခံစားရတယျဆိုတာ ဖွဈနိုငျမှာပါ။
ဆိုပါတော့ သငျ့ကို အိမျထောငျရှငျအမြိုးသားတဈဦးက ဒီလိုလာပွောမယျ…
ဒါဆိုရငျ သူကသတငျးကောငျး ကွားရလို့ တဈအားပြျောသှားတာကိုပွောနတောဖွဈသလို၊ တဈယောကျယောကျက သငျ့ကို ‘I was beside myself with anger because I just lost my mobile.’ လို့ပွောခဲ့မယျဆိုရငျ သူက တျောတျောစိတျဆိုးနတေယျ ဆိုတာကိုပွောတာပေါ့။ သဘောပေါကျတယျ မဟုတျလား။
ကဲ … excitement နဲ့ဆိုငျတဲ့ နောကျ expression တဈခုကို ဆကျတငျပွပါမယျ။ သငျဟာ အရမျး အပြျောလှနျပွီး တဈအားစိတျလှုပျရှားတဲ့အခါ ထူးထူးဆနျးဆနျး အပွုအမူ တဈခုခု ကိုလုပျမိတတျပါတယျ။ ‘You are full of joy and extremely excited about something.’ (စိတျလှတျ ကိုယျလှတျ ဖွဈသှားတယျပေါ့။)
ဥပမာစာ မေးပှဲအောငျစာရငျး သှားကွညျ့ရငျး ကိုယျ့နာမညျကို အောငျစာရငျးထဲမှာ ဂုဏျထူးတှေ တသီကွီးနဲ့ တှလေို့ကျရတော့ အပြျောလှနျလို့ ရှကျရကောငျးမှနျးမသိ လူပုံလညျကွီးထဲမှာ ကှေးနအေောငျ ကမိတာလိုမြိုးပေါ့။ ဒီလိုမြိုးဖွဈတာကို ‘flip your lid’ လို့ပွောတယျ။ ‘Lid’ ဆိုတာတဈခုခုရဲ့ အဖုံးမဟုတျလား။ အထဲက အရာတှေ အပွငျကိုမထှကျနိုငျအောငျ ဖုံးဖိပေးရတဲ့ အရာပေါ့။ ဥပမာ အိုးအဖုံးဆိုရငျ အိုးထဲက အပူဓါတျတှေ အပွငျမထှကျအောငျ ဖုံးထားပေးသလိုမြိုးပေါ့။ ‘Flip’ ဆိုတာမှောကျပဈတယျ၊ လှနျပဈတယျလို့ ပွောတာပါ။ ဒါဆို ‘flip your lid’ ဆိုရငျ သငျဟာ အရမျးအရမျး စိတျလှုပျရှားပွီး စိတျတှေ လှတျထှကျကုနျတယျ။ (စိတျလှတျ ကိုယျလှတျ ဖွဈသှားတယျ) ပေါ့နျော။ တဈခုခုကို အရမျးကွိုကျနှဈသကျလို့ အသိစိတျတောငျ လှတျသှားတဲ့ အထိ ဖွဈတယျလို့ ပွောခငျြရငျ flip your lid (over something) ကိုသုံးတယျ။ ဥပမာ - ‘A young man might flip his lid overapretty, young woman.’
ဒါမဟုတျ သငျဟာ စိတျမထိမျးနိုငျအောငျ ဒေါသထှကျတယျလို့ ပွောခငျြရငျလညျး ‘ I flip my lid because he hit my new car.’ လို့ပွောနိုငျပါတယျ။
နောကျပိုငျးမှာတော့ ဒီ expression မှာ 'flip' တဈလုံးတညျးကိုဘဲ သုံးတာလညျးတှလေ့ာရပါတယျ။ ဥပမာ Mary flipped overanew boy friend. (မရေီ က သူ့ရညျးစားအသဈကို အရူးအမူးဖွဈနတေယျ။)
ဒီexpressionနဲ့ အလားတူတဲ့ဟာ နောကျတဈခုက ‘lose your head’ ဖွဈပါတယျ။
ခေါငျးဆိုတာကိုစဉျးစားဆငျခွငျမှု၊ တှေးချေါနိုငျမှုနဲ့ တငျစားထားတာ ဖွဈတာမို့ ‘lose your head’ ဆိုတာခေါငျးမရှိတော့တာ ၊ မဆငျခွငျနိုငျတော့တာ ၊ စိတျလှတျသှားတာမြိုးပေါ့နျော။
Expression တှကေိုပုံမှနျမသုံးရငျ မသှေ့ားတတျပါတယျ။ မမအေ့ောငျ အမွဲကွိုးစားပွီးသုံးပေးပါ။
Permalink Reply by khaingzarmon on January 14, 2015 at 18:05
Permalink Reply by Yee Yee Htoon on January 18, 2015 at 15:47
Permalink Reply by Nyi Lwin on July 23, 2015 at 10:23
Permalink Reply by Ko Aung San Htun on May 10, 2016 at 23:32
Permalink Reply by zayyarmyokhin.mr on May 13, 2016 at 10:40
Permalink Reply by Soe Twin on June 21, 2017 at 23:30